आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको आयो रिपोर्ट, प्रतिस्पर्धामा कुन अघि ?
काठमाडौं : सूचीकृत कम्पनीहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने चाटारो सुरु भएको छ । यसै क्रममा बिहीबारसम्म ६ वाणिज्य बैंकहरुले पतोस्रो त्रैमास सम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चैत मसान्तसम्मको अवधिमा अधिकांश बैंकहरुको वित्तीय सूचक सकारात्मक देखिएको छ ।
सकारात्मक वित्तीय विवरणको प्रभाव वाणिज्य बैंकहरुको सेयर मूल्यमा पनि देखिएको छ । पछिल्लो केही दिनदेखि विशेष गरी वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्यमा उछाल आएको छ । उच्च कारोबार हुने पहिलो पंक्तिमा पनि वाणिज्य बैंकहरु नै रहेका छन् । हेरौं कुन वाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो :
३ बैंकको चुक्ता पुँजी यथावत, ३ को पुँजी ४% ले बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ६ बैंकमध्ये ३ बैंकको चुक्ता पुँजी यथावत रहेको छ । गत वर्षकै पुँजी यथावत हुने बैंकमा एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे र सानिमा रहेका छन् ।
यता, चुक्ता पुँजी बढाउने ३ बैंकको पुँजी पनि न्यून मात्रै वृद्धि भएको छ । एसबीआई र सिद्धार्थको चुक्ता पुँजी ४.९९% बढेको छ । भने, सिटिजन्सको पुँजी ४.२०% ले मात्रै बढेको छ ।
कति वटाको बढ्यो जगेडा कोष ?
चैत मसान्त सम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ६ बैंकमध्ये २ बैंकको जगेडा कोष घटेको छ भने अन्य बैंकको बढेको छ । सिटिजन्स र माछापुच्छ्रे बैंकको जगेडा कोषमा गिरावट आएको छ । सिटिजन्सको ०.७६% र माछापुच्छ्रेको ०.३०% ले जगेडा कोष घटेको छ ।
यता, सानिमाले सबैभन्दा धेरै २७.१९% ले जगेडा कोष बढाएर २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष एभरेष्टको ६ अर्ब १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
६ वटै बैंकको नाफा बढ्यो, सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रेले बढायो
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सम्ममा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने ६ वटै वाणिज्य बैंकहरुले नाफा बढाएका छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा माछापुच्छ्रे बैंकले बढाएको छ । बैंकको नाफा ४५.२८% ले बढेर १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, सानिमाको नाफ ३०.७५% ले बढेर १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । एभरेष्टको नाफा चैत मसान्तसम्म २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ
सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी एभरेष्ट बैंकको
६ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । एभरेष्ट बैंकको खुद ब्याज आम्दानी चैत मसान्त सम्ममा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १६.८७% ले खुद ब्याज आम्दानी बढाएको छ ।
यता, खुद ब्याज आम्दानीमा सर्वाधिक वृद्धि गर्ने सिद्धार्थ बैंकले गरेको छ । सिद्धार्थको ब्याज अम्दानी ४३.९८% ले बढेर ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको प्रतिसेयर अम्दानी घट्यो, अन्यको बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास सम्ममा सिद्धार्थ बैंक बाहेक अन्य बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । सिद्धार्थको प्रतिसेयर अम्दानी १ रुपैयाँ ३२ पैसाले घटेर २४ रुपैयाँ ७१ पैसामा अडिएको छ । यस अवधिमा सानिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानीमा सर्वाधिक वृद्धि भएको छ ।
सानिमा बैंकको प्रतिसेयर अम्दानी ६ रुपैयाँ ३१ पैसाले बढेर २६ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको छ । यता, सबैभन्दा बढी प्रतिसेयर आम्दानी हुनेमा भने एभरेष्ट बैंक परेको छ । एभरेष्टको प्रतिसेयर अम्दानी चैत मसान्त सम्ममा ३६ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ । यो गत वर्षको भन्दा ५ रुपैयाँ १२ पैसाले बढी हो ।